EPP AMBATOLAMPY AMBOHIMANARINA - Notokanana ny asa fanitarana - Ministère de l'Education Nationale
EPP AMBATOLAMPY AMBOHIMANARINA – Notokanana ny asa fanitarana
Notanterahana ny Alakamisy 28 Janoary 2016 ny lanonana fitokanana amin’ny fomba ofisialy ny fanitarana ny efitrano fianarana etsy amin’ny EPP Ambatolampy eny amin’ny faritra Ambohimanarina. Efitrano roa no nasiam-panintarana izany hoe nasiana rihana ambony ho an’ity EPP ao Ambatolampy ity. Naharitra telo volana ny asa fanamboarana tamin’izany ka anisan’ny nanampy tamin’ny fanatanterahana ny asa ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena.
Tonga teny an-toerana nisolo tena ny minisitra ny Tale Jeneralin’ny fanabeazana fototra sy mamaky teny sy manoratra Andriamatoa Andriamampandry Todisoa.
Nambarany fa midadasika ny sehatra sahanin’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena, be ny vita ary nefa koa be ny mbola harenina. Amin’ny maha zanak’Ambohimanarina ny tenako hoy izy dia nandresy lahatra ny ministra ny amin’ny hisian’ny fanamboarana ny sekoly ety amin’ity faritra Ambohimanarina ity ka dia nanaiky ny ministra ka dia efa maro ireo EPP ety amin’ity faritra ity no asiana fanatsarana . Tsy ho ela ihany koa dia ho vita ny CEG iray hafa hanampy ny iray izay efa misy, toy izany ihany koa ny Lisea.
Mahazo tombony hoy ny Tale Jeneralin’ny fanabeazam-pirenena ianareo eto satria dia omena panneau solaire ihany koa. Ankoatra izay dia nambarany fa atao vaindohan-draharaha ny mikasika ny mpampianatra Fram ka dia ho raisina mpiasam-panjakana avokoa izy ireo ka tafiditra amin’izany ireo mpampianatra Fram efa be taona eto amin’ny EPP Ambatolampy sy ireo izay mbola tsy voaray. Hisy ihany koa ny fanofanana ireo mpampianatra rehetra manerana ny nosy mba ho tsara ny kalitaon’ny fanabeazana. Nanentana ny mpianatra ihany koa ny tenany mba hikajy ny fotodrafit’rasa izay vita. Marihina fa ahitana EPP 18 ao anatin’ny boriborintany fahaenina ity , ary CEG iray sy Lisea iray.